Indlu eluhlaza enePool - I-Airbnb
Indlu eluhlaza enePool
I-Green House yindawo ethule kakhulu, ngakumbi kwiintsapho ezincinci okanye izibini ezingafuni ukuchitha yonke imali yazo kwiihotele ezibiza kakhulu. Ixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nekhitshi, ifriji, i-microwave, umatshini wokuhlamba, isomisi, izixhobo zasekhitshini, iitawuli, amalaphu e-pool, njl. Yonke into yokwenza ukuhlala kwakho kukhululekile kangangoko kunokwenzeka.
Yindawo ezolileyo kakhulu, ikufutshane kakhulu kwisikhululo seenqwelomoya sendawo kunye nemisebenzi ekufuneka yenziwe kule ndawo. Ikwanayo nendawo yokupaka, ichibi labucala, kunye negadi entle kakhulu apho udla ngokubona iintaka neenkawu.
I-TV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Netflix, intambo yepremiyamu
4.72 · Izimvo eziyi-127
IBarrio San Martín yindawo ezolileyo, emalunga nemizuzu emi-2 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseQuepos, imizuzu embalwa ukusuka kwindawo yokumisa ibhasi eya kwisixeko saseQuepos, iimitha ezingama-250 ukuya kwivenkile enkulu. Ulwandle lumalunga ne-15 ukuya kwimizuzu engama-20 ngemoto ukusuka eCasa Verde.
Indlu ifumaneka kwimizuzu eli-10 ukusuka eQuepos ngemoto. Kwisixeko saseQuepos kukho iindawo zokutyela, kwaye ungandwendwela iMarina Pez Vela Port.
Tengo una linda familia que me Dios me regaló, amo la naturaleza y hacer amistades, me gusta viajar .
Kuya kuba luyolo ukukhonza wena.